Dhamma Thoughts Archives - Popular
ရှုံးနေလျက်နဲ့ နိုင်တယ်ထင်နေတာ အံ့သြစရာ . . . ။ ယူနေလျက်နဲ့ ပေးတယ်ထင်နေတာ အံ့သြစရာ . . . ။
အတွေးနွံထဲက ရုန်းထွက် ရှုမှတ်မှုဘက် မျက်နှာမူလိုက်တဲ့အခါ စိတ်ကလေးဟာ သက်သာရာ ရလာတယ်။ ရှုမှတ်မှု အရှိန်ကြောင့် ကြောင့်ကြခြင်းတွေပျောက် တောင့်တခြင်းတွေ နောက်ဆုတ်သွားတဲ့အခါ စိတ်ကလေးဟာ ပိုမိုသက်သာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းလာတယ်...
အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ ဘဝကိုပျိုတယ်လို့ပဲ ပုံသေမထားဘဲ အိုမှာပဲ ဆိုတာ တွေးပြီးတော့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ခေမာသီရိ (လှတော)မိန့်ကြား
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပုလဲမြို့သစ်မှာ တည်ဆောက်လျက်ရှိနေတဲ့စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ကာတွန်းအနုပညာရှင် တို့ရဲ့ ခိုနားရာ နေရာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ........
ရွာချင်းတိုး၍မီးနှိုးပွဲ ကျင်းပနေကြခြင်း အနောက်ကြည့်လည်း မီးခိုးအူ အရှေ့ ကြည့်လည်း မီးခိုးအူ
လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်း တရားသဘောကို စိတ်ထဲမှာအခြေခံပြီးတော့ ကြည့်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် တရားမျက်မှန် တပ်ပြီးကြည့်တယ်ဆိုပါတော့။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာရောင်ဝါ ကမ္ဘာသို့ ထွန်းလင်း ဖြာစေအောင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကာ စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ သာသနာပြု ဆရာတော်များထဲ မှာ မှော်ဘီ အောင်ဇမ္ဗူတောရဆရာတော်လည်း တစ်ပါး အပါအဝင်ဖြစ်ပါ တယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လျောင်းတော်မူများအနက် (ဝင်းစိန်တောရလျောင်းတော်မူမပါ) ဒုတိယအကြီးဆုံးလျောင်းတော်မူဖြစ် သည့် ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ နတ်မော် ကျေးရွာ၊ ဟင်္သာတ- ပုသိမ် ကား လမ်း၊ ရထားလမ်းအနီးတွင် တည်ရှိသည့်